संघीय प्रणालीमा जो मूख्यमन्त्री हुन्छ उही पार्टी अध्यक्ष-गुरुङ::Nepali News Portal from Nepal
संघीय प्रणालीमा जो मूख्यमन्त्री हुन्छ उही पार्टी अध्यक्ष-गुरुङ
यहाँ चिनियाँ लगानी मात्र हैन, भारतीय लगानी पनि भित्र्याउन त्यत्तिकै उत्सुक छु।
पोखरा, ४ फागुन – गण्डकी प्रदेश सरकारले आज (शनिबार) आफ्नो एक वर्ष पूरा गरेको छ। गएको वर्ष फागुन ४ गते नै मूख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आशावादी छन् तर सन्तुष्ट छैनन्। केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको, कर्मचारी नपठाएको र केन्द्रिकृत मानसिकताबाटै प्रदेशहरुलाई पेलेको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल बिताएका छन्। मूख्यमन्त्रीको रुपमा बिताएको एकवर्ष कस्तो रह्यो? केन्द्रसँग किन गुनासो ? यी विषयमा ढोरपाटनसंगको संवादमा मूख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यसरी खुले :
मूख्यमन्त्रीको रुपमा एकवर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
धेरै देशको संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरी धेरै दुखान्त, अत्यन्त समस्यामूलक देखिन्छ। हामीमा सरकार र प्रदेशबीच अन्तरविरोध पैदा भएपनि, द्वन्द्व भएपनि संघीयता कार्यान्वयनको दिशा सही नै भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसमानेमा पनि म खुसी नै छु। संघीयता कार्यान्वयन नै हाम्रो मूल अभिभारा हो र त्यही दिशामा गण्डकी सरकार अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो दावी हो। हामीले सिमित स्रोत र साधनको बाबजुद केही काम गरेका छौँ। यहाँ प्राविधिक विश्वविद्यालयको कुरा अगाडि बढेको छ, प्रदेशका अध्याँरा बस्तीहरुलाई उज्यालो बनाउने अभियान अगाडि बढाइएको छ। सीमान्तकृत समुदायको हितमा केही कार्यक्रमहरु आएका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले सम्वृद्धिको अभियानमा केही मित्रराष्ट्रहरुसँग सहकार्यको हात बढाएका छौँ। दाताहरुसँग हाम्रो सहकार्य भएको छ। र, सहकार्यको अभियानमा एडिबी (एसियाली विकास बैंक) लगायतका दाताहरु र लगानी भित्र्याउने सम्भावनामा उनीहरुबाटै सम्भाव्यता अध्ययनको अभियान चलाएका छौँ। त्यसो त, अन्य प्रदेशले पनि यस्तो काम गरे होलान् तर हामीले चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीचमा भगिनी सम्बन्ध पनि कायम गरेका छौँ। यही बीचमा २० जनाको लागि प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्तिको सम्झौता पनि भएको छ। अरु थुप्रै देशका लगानीकर्ताहरुसँग सम्बन्ध बढाएका छौँ। विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा गण्डकी प्रदेश एक कदम अगाडि छ। धेरै चिज मिल्दै गयो भने तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, गण्डकी प्रदेश सातवटा प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट प्रदेश बन्छ। यो मेरो आत्मविश्वास हो। हामीसँग जे श्रोत र साधन छ, निजी क्षेत्र र विदेशबाट लगानी भित्र्याउने कुरामा म ढुक्क छु। संघीय सरकारले अभिभावकत्व दियो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ।
संघसँग त तपाईंको जुहारी नै चल्छ, बेला–बेला। दुई नम्बर प्रदेशका मूख्यमन्त्री लालबाबु रावत र तपाईंको आवाज झण्डै एउटै पनि सुनिन्छ, जबकि तपाईं वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मान्छे !
कर्मचारीलाई दोष दिएर मूल नेतृत्वलाई जोगाउने कुरा पो गर्नुभयो त !
संघले अधिकार दिएन भनेर चर्को स्वर निकाल्दै आउनुभएको छ। कहिले होला तपाईँले भनेजस्तो ?
हैन, यो चलिरहन्छ। जुनबेलासम्म संघले गलत काम गरिरहन्छ, त्यो बेलासम्म आवाज उठाउने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै हुन्छ।प्रदेशको अधिकार माग्दैगर्दा तपाईँको र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो ?
सम्बन्धै चिसिएको भए त मलाई किन पार्टी इन्चार्ज बनाउनुहुन्थ्यो र? यहाँ पार्टी इन्चार्ज हुने अरु थुप्रै थिए। मलाई विश्वास गरेरे उहाँ (केपी ओली) ले जिम्मेवारी दिनुभएको हो। आलोचना गर्ने त पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जिम्मेवार भएको नाताले हो। जसरी उहाँले विश्वास गरेर, पत्याएर इन्चार्ज बनाउनु भा’छ, सायदै मसँग साह्रै धेरै रिसाएको भए यस्तो हुन्थ्यो र ?
तपाईँले घुर्की देखाउनु भयो र पद पाउनुभयो भनेर टिप्पणी गर्छन् नि मानिसहरू ?
समस्या सुशासनमा छ भनिन्छ, सुशासनका लागि तपाईँले चालेका कदम ?
तपाईँ त केन्द्रमै मन्त्री भएको मान्छे, काठमाडौं खाल्डोमा झण्डावाल गाडीमा हिँड्नु र यहाँ त्यही झण्डावाल गाडीमा हिँड्नुमा केही फरक पाउनुभयो ?
एक नम्बर मन्त्री को हो त ?
पार्टीकै कुरा गरौँ, एकता प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्याउनु हुन्छ, किनकि दायित्व तपाईँको पनि हो ?
दुई जिम्मेवारी सँगै लैजान गाह्रो हुँदैन? एउटा मान्छेलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिइएकोमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गुनासो पनि त छ नि !
अलिकति अगाडि तपाईँले विदेशी लगानी र खासगरी चीनसँगको सम्बन्धबारे कुरा उठाउनुभयो। सुस्तादेखि कोरलासम्म भएको प्रदेशको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्नु भएकै होला !